शेखर र सीटौला मीले कांग्रेसमा कायापलट हुन्छ — News of The World
नेपाली कांग्रेसका बहुसंख्यक जिल्ला सभापतिहरु अहीले काठमाडौ भेलामा केन्द्रीत रहेका छन् । सभापतिहरुको भेलामा विशेष महाधिवेशन सम्मका कुरा उठेका छन् । के सभापतिको भेलाले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाउन पाउँछ ? नेपाली कांग्रेसको विद्यानले के भन्छ ? यी र यस्तै यावत विषयमा हामीले आज नेपाली कांग्रेस काठमाडौका पुर्व सभापति तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य भिमसेनदास प्रधानसँग सन्सारन्युजले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ प्रधानसँगको कुराकानीको सम्पादीत अंश ।
जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले पार्टीमा तरङ्ग ल्याएको छ नि ?
यस्तो भेलाको कन्सेप्ट म काठमाडौ सभापति भएको बेला ल्याएको हु । सभापतिहरुको नेटवर्क निर्माण गर्ने, राजधानीमा बाहिर बाट आउने साथीहरुको बसाइलाई व्यवस्थापन गर्न सेल्टर निर्माण गर्ने सहितका उदेश्य राखेर यस्तो बैठकको आयोजना गर्ने कन्सेप्ट मैले ल्याएको थिए ।तर पछिल्लो समयमा यो पवित्र उदेश्यलाई किनारा लगाएर गुट निर्माण गर्न सभापति भेला आयोजना हुन थालेका छन् । यो दुखद हो ।
जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले पार्टीलाई कस्तो दबाब दिन्छ होला ?
यो भेलाले कुनै वैधानीक दबाब दिनै सक्दैन । यो भेला आफै वैधानीक होइन । पछिल्लो समय यस्ता भेलाको नैतीक हैसीयत पनि सकियो । यो भेला अवैधानीक हो ।
महासमितिले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याउन पाइन्छ र ?
अहिले बजारमा आए जस्तो महासमितिको निर्णय केन्द्रीय समितिले उल्ट्यायो भन्ने विषय नै हल्ला हो । कहाँ गरेको छ महासमितिले यस्तो निर्णय ? महासमितिमा केन्द्रीय सदस्य तलैबाट प्रतिनिधि बनेर आउनुपर्ने आवाज उठेको हो । आरक्षणमा पनि एकपटकलाई मात्रै भन्ने विषय आएको हो । महासमितिले निर्णय गरेको होइन । नेताहरुले आस्वासन दिएका हुन् तर पुरा गर्न सकेनन् ।
त्यसोे भए पार्टीको बहुमतको निर्णय जिल्ला सभापतिहरुले नमान्ने भनेर चुनौती दिन पाइन्छ ?
हाम्रो पार्टी प्रजातान्त्रीक भएपनि, आचरण कहिल्यै प्रजातान्त्रीक भएन । प्रजातन्त्रमा त बहुमतको निर्णय स्वीकारीनु पर्छ । नेतृत्व बहुमत पाउनेले गर्छ अल्पमतका साथीहरु अर्को महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नु पर्ने हो । हाम्रा साथीहरु त भागवन्डा बाहेक अरु देख्दै देख्दैनन् ।
सभापतिले वचन दिएपछि त पुरा गर्नु पर्ने नि होइन र ?
शेरबहादुर देउवाले पार्टी चलाउनै सकेनन् । न सर्वसम्मत गर्न सक्छन् न त बहुमत वाट पार्टी हाक्न सक्छन् । रामचन्द्र जी कहिल्यै नेता बन्न सकेनन् । उनी जहिले पनि भागबन्डा बाट बाहीर निस्कनै सकेनन् ।
अहिले विशेष महाधिवेशनको कुरा पनि उठेको छ नी ?
विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गर्छौ भन्ने जिल्ला सभापतिहरुको वैधानकि अधिकार छैन । यो त महासमितिको अधिकार हो । महासमितिका २५ प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरेर सभापतिलाई बुझाए, सभापति वाध्य हुन्छन् । अहिले चार हात उफ्रीनुको अर्थ छैन । तपाई ढक्क हुनुहोस पार्टी महाधिवेशन २ वर्ष भन्दा अगाडी हुदै हुदैन ।
केन्द्रीय नेताहरु तल्ला कमिटिबाट आउने, आरक्षणमा एकपटक बढी लोभ गर्न नपाइने विषय त राम्रा छन तर यसका विरुद्ध पार्टी नेतृत्व किन लागेको हो ?
महासमितिमा उठेको विषय असाध्यै राम्रो थियो । तर केन्द्रीय सदस्यहरुले यो कुरा पचाएनन् । सभापति देउवाले पनि पेलेर निर्णय गर्न सकेनन् । यस कारण म भन्छु – यस्तो राम्रो विषयलाई हराइदिने केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जिल्ला सभापति र महासमिति सदस्यहरु मीलेर हराइ दिए हुन्छ । आगामी महाधिवेशनमा यस्तो नेतृत्वलाई किनारा लगाउने अधिकार हामी सँग सुरक्षीत छ ।
यता आगामी महाधिवेशनमा शेखर कोइराला र कृष्ण प्रसाद सीटौलाको नयाँ गुटको बन्दै छ रे नि हो ?
नेपाली कांग्रेस भित्र उहाँहरु सबै भन्दा बढी क्षमतावान नेता हुनुहुन्छ । यदि उहाँहरु मील्नु भयो भने बुझ्नुस कांग्रेसमा कायापलट हुनेछ । यो अवसर उहाँहरुले जुराउनु हुनेछ भन्ने विश्वास मेरो पनि छ ।